Archive du 20170217
Governemanta Miady an-trano ny HVM
Araka ny loharanom-baovao iray, dia tsy mifankahazo ny minisitra miisa 3 ao anaty governemanta, kanefa samy olon�ny HVM avokoa.
Fitondrana Rajaonarimampianina Ampy azy ny 5 taona, hoy ny Marina
Nandritry ny fifampiarahaban�ny antoko politika Marina teny amin�ny villa verte Ambatomirahavavy no nanaovany fanambarana miezinezina omaly,
Fanamelohana an�i Lylison Foano hoy, ny Mapar
Tsy ara-dal�na fa tsy nahazoan�ny voapanga na ny mpisolovavany fampiantsoana akory ny nanaovana ny fitsarana ny Loholon�i Madagascar, Lilyson Ren� de Rolland, hoy ny vondrona Mapar nivoaka tamin�ny fahanginany omaly teny Ambodivona.
Didy mikasika an�i Lilyson Ramatahora, hoy i Doudou
Anisan�ireo mpanao politika naneho ny heviny mikasika ilay didim-pitsarana mikasika ny fisamborana ny loholona Lilyson ihany koa ny filohan�ny dinika fanavotam-pirenena (DFP),
DISTIM Atsimo Andrefana Tafatsangana koa ny any Betioky sy ny manodidina
Fantatra fa tafatsangana koa ireo Distim any Betioky Atsimo tarihan�Atoa Alphonse, sy any Ankazoabo Atsimo tarihan�Atoa Mamy Benoit ary ny any Beroroha tarihan�Atoa Velonay R�mi,
Antenimierandoholona Mikoropaka ny lohandohany
Nivoaka ny resaka amin�ny fisian�ny fitantanam-bola tsy mazava amin�ny antenimierandoholona, ary misy mihitsy ny mivoy ny hanaovana grevy manoloana ny tsy fisian�ny mangarahara.
Amoron�i Mania Miady an-trano ny HVM
Mitsingilahila ny toeran�ny lehiben�ny Faritra Amoron�i Mania. Mahoraka ao Ambositra renivohitry ny faritra tato anatin�ny herinandro teo izay fa misy mikononkonona hanala amin�ny toerany ny Administratera sivily Rakotomanankiafarana Tsimihonoraibe Jo�l, lehiben�ny Faritra am-perinasa, ary avy ao amin�ny HVM ihany no miketrika izany.
Fampandrosoana an�i Madagasikara Ny mpitondra no sakana, hoy i Tsarahame Edouard
Nandalo tao Mahajanga ny mpitarika ny antoko Rodobe Malagasy Fanorenana Ifotony na ny RMFI ny sabotsy lasa teo.
Taratasin�i Jean Tia tanindrazana ?
Miarahaba anao indray aloha ry Jean a ! Tia tanindrazana marina moa i Jean ity ? Ianao moa ve tsy hiteny hoe eny tia tokoa !
Boaderozy tratra tany Cap Masoala Nafenina ny marina ?
�Raha mbola eto ny tenako, dia tsy hanaiky aho ary tsy maintsy hisy ny fanasaziana. Tazoninareo amin�ny teniko aho��.
Madagasikara Tany tsy misy lal�na intsony�
Manomboka any amin�ny filoham-pirenena ka hatramin�ny vahoaka madinika no mandika lal�na eto Madagasikara.
Delegasiona avy amin�ny � Region Normandie � Nandalo tetsy amin�ny Antenimierandoholona
Ny alarobia 15 febroary 2017 teo, dia noraisin�ny Filohan�ny Antenimierandoholona Rakotomanana Honor� tao amin�ny Lapa Maitso Anosikely ny delegasiona avy amin�ny � Region Normandie �,
CSB II - ANDRAVOAHANGY TSENA Nodiovin'ny kaominina
Loto, fofona, fotaka no hita mameno ny tan�na eny Andravoahangy tsena manoloana ny CSB II rehefa vanim-potoanan�ny fahavaratra tahaka izao.
BORIBORINTANY FAHA 6 Nahazo koveta sy sio ireo vehivavy mpanasa lamba
Nahazo koveta sy sio avokoa ireo vehivavy sy renim-pianakaviana mpanasa lamba ao Ambohimanarina, Boriborintany fahenina. Am-polony maro izy ireo no notolorana fitaovana omaly hahafahana manampy azy amin�ny asa fivelomany.
Oniversite ACEEM Hampianatra ny fikajiana ny tontolo iainana
Tsy afenina intsony fa tena tsy mitsaha-mitontongana ny fahasimban�ny tontolo iainana eto amintsika.
Olona manana fahasembanana Te hisitraka ny zon�izy ireo feno
Ela ny ela ka mba tafakatra lapam-panjakana ny fikambanan�ireo olona manana fahasembanana mivondrona ao amin�ny PFPH na ny �Plateforme des F�d�rations des personnes handicap�s de Madagascar� notarihan�ny Sekretera mpanatanteraka,